Friday November 16, 2018 - 23:21:31 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-War-saxaafadeed Ururka Vosomwo ee u Dooda Xuquuqda Bulshada la Takooro ee Gabooye, waxa uu Cod dheer ku Cambaaraynaya Barnaamijka shaqo qaran, ee Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi ku dhawaaqday, kaasoo ay sheegeen inay 1500 Qof oo Loo Samaynayo Shaqo Qaran.
Sidoo kale, Ururka Vosomwo, waxa uu Xukuumada Madaxweyne Muuse ugu baaqayaa inay ka badho jidkii cunsuyadda ee Xukuumadihii ka horeeyey ku hayeen bulshada gabooye, oo laga Takooray Xuquuqahoodii aas-aasiga ahaa ee ay Kala sinnaayeen muwaadiniinta kale ee Somalilanderka ah. Kuwasoo ku takooray qalinka Madaxweynenimo in Xukuumada laga siiyo saamiyadoodii iyo in golayaasha qaranka ka madhnaadan, sidoo kale waxa iyanna cajaa'ibba ah in xataa shaqaale hoosaadka dawlada laga takooray Bulshada Gabooye. Iyadoo ay jiraan dad aqoonyahano ah oo kasoo jeeda bulshadan la isir Takooray, ayaa haddana waxa marar badan dhacday in iyagoo kusoo baxay Imtixaanaad laga saaro dadka helay shaqooyinka dawlada ama waxbarashada deeqaha dibada.
Sidaas daraadeed mudane Madaxweyne waxanu kugu baaqaynayaa inaad hormuud tusaale ah ka noqoto, sidii Bulshadan Gabooye ee sidii loo Takooraayey nuglaatay aad ka saarto, isla markaana meel cad iska dhigto xuquuqdooda shaqo qaran, Masuuliyiinta dawlada, shaqaalaha kale Xukuumada iyo mashruuc kastoo muddo xileedkaaga aad fuliso, waxanu kaa Codsanaynaa inaad Kooto Tiro go'an ugu xidho Bulshada Gabooye.
Ugu Dambayn, waxanu Mudane Madaxweyne adiga iyo masuuliyiintaada Barnaamijka shaqo qaran gacanta ku haysa, waxanu idinka Codsanaynaa inaad tiro go'an gobol walba ka siisan Bulshada Beelaha Gabooye. Filasho wacan baanay idinka eegayaan Beelaha Gabooye iyo jawaab Deg-deg ah.